Devozione del giorno: il Crocifisso nella vita | Io amo Gesù
Ura nke ubochi: Obe nkpuru na ndu
di Paolo Tescione - Ọktoba 14, 2020
Echiche nke Crucifix. Have nwere ya n'ime ụlọ gị? Ọ bụrụ na ị bụ Onye Kraịst, ọ ga-abụrịrị ihe kacha dị oke ọnụ ahịa n’ụlọ gị. Ọ bụrụ n’ị na-ekpesi ike, ị ga-enwerịrị ọla dị oke ọnụ: ọtụtụ na-eyi ya n’olu ha. Ọ doziẹru Jisọsu l'ẹka; lee ọtụtụ ọnya ha n’otu n’otu; chee echiche banyere ihe mgbu a, chee onye Jizọs bụ.… you kpọgideghị ya n'obe na mmehie gị? Ya mere, ị nweghị anya mmiri nchegharị maka Jisos? Soro, n'ezie, kwụpụ na ya! ...
Tụkwasị na Crucifix. Mkpụrụ obi ị n’enwe obi nkoropụ, leebe n’obe: Jizọs, ọ nwụrụ maka gị, ịzọpụta gị? Tupu ya anwụọ, ọ rịọghị mgbaghara maka gị? Ọ gbagharaghị onye ohi ahụ chegharịrịnụ? Ya mere nwee olile anya na Ya. Obi nkoropụ bụ ajọ iwe nke a kpọgidere n’obe! - Mkpụrụ obi na-atụ ụjọ. Jisos nwuru imeghe igwe nye gi; ... ma gini mere na etinyegh onwe gi n'aka ya? - Mkpụrụ obi nsogbu, ị na-ebe akwa; ma lee Jisos onye na-emeghị ihe ọjọọ ole Ọ na-ata ahụhụ maka ịhụnanya gị… Ka ihe niile bụrụ maka ihunanya nke Jizọs akpọgidere!
Nkuzi banyere Obe. N'akwụkwọ a, nke dị mfe ịtụgharị uche na mmadụ niile na ebe ọ bụla, lee omume ọma ndị akọwapụtara na ndị doro anya! Read gụrụ otu Chineke si ata ahụhụ, ma mụta ịgbanahụ ya: ị gụọ umeala n'obi Jizọs, nrubeisi ya, mgbaghara nke mmerụ ahụ, mmụọ nke ịchụ aja, ịhapụ Chineke, ụzọ isi bulie obe, ọrụ ebere. ihunanya nke Chukwu ... Gini mere ị gaghị atụgharị uche na ya? Gịnị mere na ị naghị e imitateomi Crucifix?
OMUME. - Debe Crucifix n ’ime ụlọ gị: susuo ya ọnụ ugboro atọ, sị: Jesus n’elu obe, ọ masịrị m!
Ekpere nye St.
Nraranye nye Thomas: ekpere nke ezigbo mgbaghara!
Ọsọ ọsọ na - efe ofufe: February 24, 2021